Home » Aha! Jokes, Satire » အော် ပ ရေ တာ ဘလက်…(3)
mite tal byar
ရွာထိန်း D ကုန်တာ ဘူအကြာဆုံးလဲ ပြိုင်မားးး
အဲဒီထဲက စာသားတစ်ပိုဒ်ကို ကြော်ငြာထိုးပါရစေ…
.ရေးသူက ကျနော်.. ဟဲဟဲ..
ပို့စ် ဖတ်သွားကြောင်း မှတ်တမ်းချန်တဲ့အနေနဲ့ ကြုံရာကျပန်း ဝင်ပြောသွားတာပါလို့စ်
ကျောက်ဖြူသဘောင်္မှောက်တာ ကယ်ဆယ်ရေးဘာလို့ မရောက်တာလဲတဲ့
ကျောက်ဖြူသတင်းက ၁၅၀ လောက်ပဲဆယ်ရတယ်တဲ့။ ပါသွားတာ ၂၀၀ နဲ့ ၃၀၀ နှစ်မျိုးကွဲနေတယ်။ အလောင်းကတော့ ၇၀ လောက်ရတယ်ဆိုလား လောလောဆယ်ဆယ် အပ်ဒိတ်
ဟယ်ဒီတခါ အော်ပရေတာ အလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်မလုပ်ဘူးထင်ဒယ်။ သတင်းတွေနဲလိုက်တာ အော်ပရေတာဂျီးရယ် နောက်တခါ များများလေး
@ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့လစ်ဘရယ်ယောက်ျား ;
ကိုကို ဘက်​​ရေ အဲ့ D ဆိုတဲ့ အ​ကြောင်း ကျ​နော်​မသိလိုက်​ပါလားဗျာ ။ မသိဆို ဖုန်း​ဘေလ်​ မရှိလို့ ​နေ့လည်​က ခဏပဲ ဖွင့်​ပီး ဒီ​နေ့ ပို့စ်​တစ်​ပုဒ်​ တက်​အံ့ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်​ချက်​နဲ့ ထိုင်​​ရေး​နေတာဗျ ။ ​နေကပူ​တော့ ဇန်​မ၀င်​ပါဘူးဗျာ ။ ဘီယာ​ခေါ်တိုက်​မဲ့ သူလဲ ရှိဘူးဗျ ။
အူးဘက်​က​တော့ လွတ်​ပြီး… သများပြန်​​ရောက်​နေပါပြီ…သကြန်​တွင်း၉ရက်​ဆက်​တိုက်​အလှူလုပ်​မှာမို့ ဖိတ်​ချင်​ပါတယ်​ဆိုလည်း ရတယ်​​နော့… ဖြူဖြူ​ကျော်​အ​ပြောဖတ်​ပြီး… ကိုယ်​သာဆို… ဘာလုပ်​​ပေးရပါ့​တွေး​နေ​သေး… ဘာမှဖြစ်​ဖြစ်​​မြောက်​​မြောက်​မတတ်​လို့… :loll:
တက်တူးမ ဆိုတဲ့ ကျောကုန်းကြီးကို ဈေးသွားရင်းဈေးနားကအခွေငှားဆိုင်မှာ တွေ့တွေ့နေမိတာ
ဟုတ်မဟုတ်တော့ သများလဲ ကိုယ်တိုင် မဖတ်ရတော့ မသိ။
အင်္ဂလိပ်က.. မြန်မာပြည်ကို ကိုလိုနီပြု.. သိမ်းတော့လည်း.. မြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်ရွိုင်ရယ်တပ်တွေနဲ့တိုက်ကြပြီး.. ရှုံးရတာမဟုတ်ပါဘူး…။
နောက်မှ.. အဲဒီကုမ္ပဏီက.. မြန်မာနိုင်ငံကို.. အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးကို.. မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်..ပေးလိုက်တာ…။
အဲသည့် ကုသလတွေကို လမ်းပြပြီးခေါ်လာတဲ့…
တစ်ယောက်ကို ငါးသိန်းကြီးများတောင် အကြွေးတင်နေတယ်ဆိုလို့
ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်တောင် ကြွေးတင်နေတာ ဘိုလုပ်မတုန်း….
@ Kaung Kin Pyar ;